Xayawaan ku guuleystay arrin ay ku fashilmeen dalal badan oo Afrikaan ah – Awdaltoday
Ugaarsatada ku sugan Afrika, oo ku hubeysan qoryaha milatariga isla markaana xitaa qaarkood haysta helikobtarro ay wax ku ugaarsadaan, ayaa waxay caqabad kala kulmayaan eeyda wax uriya.
Eeydan oo lagu daad-gureeyay lix meelood oo Afrika ka tirsan ayaa waxay tiradoodu gaareysaa 50.
Waxaa eeydan loo adeegsaday inay gartaan faanta maroodiga iyo geesaha wiyisha – taas oo horseedday in la soo xiro boqollaal qof oo xubnaha duurjoogtaas dhoofinayay, iyo in la xiro marinnadii ay adeegsan jireen.
Lahaanshaha sawirkaPAUL JOYNSON-HICKS
Ilaa 400 oo xubnaha duurjoogta ah ayaa la qabtay tan iyo intii la bilaabay barnaamijkan oo ay maalgelisay hay`adda Duurjoogta Afrika, sanadkii 2011.
Will Powell, oo ah agaasimaha barnaamijka Canines for Conservation, ayaa sheegay in “ay tahay iskaashi gaar ah” oo lala yeelanayo dowladaha taasoo ka caawineysa in eeyo ay la shaqeeyaan ururrada difaaca duurjoogta.
Shaqaalaha u tababaran la shaqeynta eeyda ayaa aad looga baadi-goobayay dalalka Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Botswana iyo Cameroon.
Shaqaalaha ayaa xirfaddan la baraa muddo u dhaxaysa siddeed ilaa 10 toddobaad.
Waxaa kaddib si taxadar leh loo raaciyaa eeyga la shaqeyn lahaa, iyadoo shaqaalaha qaar aysan hore ula shaqeyn eeyaha amaba qaarkood ay keliya u yaqaanneen in ilaalo ahaan loo adeegsado.
Waxay bartaan sidii ay eeyahooda u jeclaan lahaayeen, u daryeeli lahaayeen una xushmeyn lahaayeen.
Koox dhowaan qalin-jebisay oo Cameroon ku sugan ayaa la sheegay inay ku guuleysteen sida loola dhaqmo eeyda.
Mr Powell ayaa doorta eeyda ku noo Yurub, iyo dalalka uu ka jiro dhaqanka adeegsiga eeyaha sida Netherlands, Jamhuuriyadda Czech iyo Hungary.
Eeyda ayaa hore u haystay tababar – balse wuxuu siiyaa aqoon u dhiganta shahaadada PhD.
“Waxaanu raadinnaa eeyo kalsooni leh yaqaannana howshooda,” ayuu yiri Mr Powell, oo ah muwaadin u dhashay Britain, isla markaana xirfaddiisa ku bilaabay inuu eeyaha u tababaro baaridda miinooyinka.
“Waa inay la shaqeyn karaan tiro shaqaalaha u tababaray eeyaha.”
Labo nooc ayaa ugu fiican eeyaha baaritaanka loo adeegsado: Malinois iyo springer spaniels.
Malinois, oo Biljamka ka soo jeeda ayaa lagu yaqaannaa inay yihiin kuwo caqli badan, adag isla markaana kuleylaha u adkeysan kara.
Eeyda springer spaniels ayaa si fiican wax u uriya waana kuwo dabacsan oo lala shaqeyn karo.
Waxayna leeyihiin faa`iido kale, Mr Powell ayaa sharraxaya.
“Waxaa badanaa jirta cabsi laga qabo eeyda, kuwa dhegaha dhaadheer ayaa laga baqaa, halka kuwa dhegaha laaban aanan sidaa looga cabsan. Meelaha ay tahay inaad dadka la shaqeyso waxaa la adeegsadaa eeyaha spaniels.”
Labadan nooc ayaa leh taariikh wanaagsan oo dhanka shaqada ah, iyadoo sababtu ay tahay inay jecel yihiin inay mashquul ahaadaan.
Nolosha shaqo ee eeyga ayaa waxay ku tiirsan tahay nooca uu yahay.
Nooca Malinois, waxay sii shaqeyn karaan 12 ilaa 13 sano. Marka ay howlgab noqdaan, waxaa la geeyaa guryo amaba waxaa lagu celiyaa xarunta Mr Powell ee dalka Tanzania.
“Waxaanu ku bilownaa inaan eeyda barno sidii ay usoo saari lahaayeen faanta taasoo ah tan ugu adag. Geeska wiyisha way fududdahay in la garto,” ayuu yiri.
“Waxaan hadda barnaa inay gartaan lafaha iyo ilkaha libaaxa, kuwaasoo daawo ahaan loogu dhoofiyo Shiinaha iyo kuwa shabeelka oo haatan si ba`an loo ugaarsado.”
In eeyda loo tababaro baaritaan sare waxay qaadataa afar ilaa shan bilood.
Dhammaan xubnaha duurjoogta ee ay tahay inay soo qabtaan waxaa loo qariyaa hab aan la aqoonsan karin.
Meelaha ay eeydu ka heleen faanta iyo geesaha wiyisha waxaa lagu daboolay bun iyo basbaas, waxaana lagu duuduubay bac. Waxay xitaa soo qabteen ilig libaax oo lagu dhex riday tarmuus.
Marka ay eeydu helaan xubnaha duurjoogta waa la abaal mariyaa.
Eeyda sida gaarka ah loo tababaray waxay uriyaan alaabta iyagoo ka baaraya faanta iyo geesaha wiyisha.
Kuwa wax ugaarsada ayaa haatan ka warqaba in eeyaha wax uriya ay baaraan duullimaadyada caalamiga ah, sidaas daraaddeed Canines for Conservation ayaa waxay sidoo kale la shaqeeyaan maamullada dekadda Bariga Afrika ee Mombasa iyo Dar es Salam.
Cudur Aan Wali La Garan Oo La Dilaacay Shiinaha Iyo Dad Badan Oo Uu Soo Ritay Cudurkaasi
Amp Safiina Oo Iska Casilay Xisbiga Waddani
Borama:- 610 Codsade Ayaa Maanta Uu Fadhistay Imtixaanka Shaqo Qaran Ee G.Awdal Wajigiisa Labaad.
Daawo:- Aqoonyahan Soomaaliyeed Oo Shaki Geliyay In Madaxweyne Farmaajo…
Borama:- Ardayda Ka Qaybqaadanaysa Imtixaanka Wajiga Labaad Ee Barnaamijka Shaqo Qaran Ee G.Awdal Oo Fariin Loo Diray
Daawo:- Wasaarada Caafimaadka S/land Ayaa Kulan Deg Deg Ah Isugu Yeedhay Hay’adaha Kala Shaqeeya Caafimadka.
Copyright © 2020 Awdaltoday